We She Me: IKEA
May Burma - 9/3/08, 10:11 PM
I like Ikea. Good design within budget for students and young trendy professionals. Not for long term. Good post ! Congrats!
pp - 9/3/08, 10:31 PM
သွားအုံးမယ်။ တမ်းပနိစ့် MRT နဲ့နီးလား။ ဘတ်စ် စီးသွားရသေးလား။ သွားလည်မလို့။ :D
တောင်ငူသား - 9/3/08, 11:19 PM
DAISO ကိုတော့ သွားလေ့ရှိပေမယ့် IKEA ကိုတော့ အခုမှ သိတာပါ။ ကျွန်တော်သာဆိုင်ရှင်ဆိုရင်တော့ ကိုအန်ဒီကို ကြော်ငြာခပေးမိမှာပဲ။ ကိုအန်ဒီအညွှန်းကောင်းလို့ ချက်ချင်းမဟုတ်တောင် ရောက်အောင်တော့ သွားရဦးမယ်။ အခုတော့ ကြော်ငြာခမဟုတ်ပေမယ့် စာမူခ တော့ ချီးမြှင့်သွားပါတယ်ဗျာ။
khin oo may - 9/4/08, 12:04 AM
တို့လဲ နှစ်ခေါက်လောက်ဘဲံ ရောက်ဘူး တယ်။ လမ်းကြော မသင့်တာနဲ့။ သု့ဆီ က မီလုံး အချိူ့ ကို တော့ ရအောင် လေယာဉ် နဲ့ ရန် ကုန် ကို သယ် သွားပြီး အိမ် မှာ ထည့်လိုက်တယ်။ လှတယ် ဆရာ။
အချိန် ကရှားတယ် လေ။ ကား ကလည်း မရှိ အားတဲ. စနေ ညနေ လေး ကလည်း peninsular နဲ့ဘဲ အချိန် ကုန်တာ များတယ။် သု့ကက်တလောက် ကလေး တွေ စာတိုက့် ပူံးထဲ ထည့် သွား ရင် တော်တော် နဲက မလွှတ် ပြစ် ဖြစ် ဘူး ။.ချစ်စရာ စိတ် ဝင် စား စရာ ကောင်းတယ်။ နောက် ဆုံး တော့လည်းစိတ် ဘဲ ရောက် လူ ကတော့ မရောက် ဖြစ် ပါဘူး။
Anonymous - 9/4/08, 1:18 AM
စင်ကာပူမှာတုန်းက သူများတွေ မသိအောင် ကိုအန်ဒီ တိတ်တိတ်လေး သွားသွားနေတဲ့ နေရာ အကြောင်းကော မရေးဘူးလား
ပီတိ - 9/4/08, 2:02 AM
အိုင်ခီယာကနေ၀ယ်လာတဲ့ အထဲမှာတော့ ထမင်းစားတဲ့ ကြွေပန်းကန်နဲ့ ဟင်ထည့်တဲ့ ပန်းကန်တွေကတော့ အတန်ဆုံးပဲ... တခုကို $1 အောက်ပဲ... ၀ယ်ရတာတောင် ပျော်ဖို့ကောင်းသေးတယ်.... ၀ယ်ဖူးတဲ့ တဘက်ကလည်း ဈေးတော်တာပါပဲ... ရောက်ရင်တော့ ကိုအန်ဒီ ပြောသလို့ အနည်းဆုံး ဟော့ဒေါ့တော့ စားဖြစ်တယ်...
Moe Cho Thinn - 9/4/08, 3:33 AM
တို့လဲ IKEA ပရိသတ်..။
(သူပြောလို့ အသံထွက်မှားမှာစိုးလို့ အင်္ဂလိပ်လို ရေးလိုက်ရသေး :D )
ဒီမှာတော့ ခေါ်တတ်သလို ခေါ်ကြတာပါပဲ။ သတင်းတွေထဲမှာကို တယောက်တမျိုး အသံထွက်တာ ကြားဖူးတယ်။ တို့လဲ ဘယ်လိုအသံထွက်လဲ သိချင်လို့ နားစွင့်မိတာ။
Andy Myint - 9/4/08, 3:32 PM
Thanks Aunty May. If you don’t mind addressing like that :-) Yeah, I also like some stuffs from IKEA.
MTR ကနေ Shuttle bus စီးသွားလို့ ရတယ်လေ PP
စာမူခ ချီးမြှောက်သွားတာ ကျေးဇူးပါ တောင်ငူသားရေ.. သွားသင့်တယ်ဗျာ.. သွားပါ။
တူနေပြန်ပြီ ကျွန်တော်တို့လည်း Energy Saving မီးလုံးတွေက မြန်မာပြည်ကို ၀ယ်ထည့်ပေးတယ် မခင်ဦးမေ။
သူများတွေ မသိအောင် သွားပါတယ် ဆိုမှ သူက သိနေပြန်ရောလား.. ဟီးဟီး။
အင်းဟုတ်တယ် ကိုပီတိ.. အိုင်“ခီ”ယာ ထွက်ရင် ကောင်းမှာ ..ကျွန်တော်ကတော့ ငါးပိသံနဲ့ အိုင်“ကီး”ယားလိုက်တာပါပဲ။
ကြိုက်တာသာထွက် မမိုးချိုသင်းရေ… နားထောင်တဲ့ သူ နားလည်ရင် ပြီးတာပဲ
Anonymous - 9/4/08, 9:49 PM
ဦးလေးက အရေးအသား မဆိုးဘူးဗျ။ ရေးတာ သွက်သွက်လက်လက် ရှိတယ်။ ငယ်ငယ်က ကျောင်းမှာ မြန်မာစာ ဂုဏ်ထူး ခနခန ထွက်ဖူး ပုံရမယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေကျ ၀ါကျတွေက နည်းနည်းရှည်တတ် တယ်။ ဖတ်ရတာ ထောက်ထောက်သွားသလိုပဲ။
Anonymous - 9/4/08, 10:21 PM
အဓိပတိကျူရှင်ထွက်ဘဲဟာ။ မတော်တာဆိုလို့ ကိုယ်ဘဲရှိတယ်။
May Moe - 9/5/08, 2:57 AM
တုံးတယ်လို့ပဲပြောချင်ပြောတော့ Daiso ဆိုတဲ့ဆိုင်ကို တကယ်မသိဘူး ။ ရှာပြီး သွားကြည့်အုန်းမယ် IKEA ကတော့ ရောက်ဖြစ်တယ်
Anonymous - 9/5/08, 7:58 AM
IKEA isagood case study for operation management discipline. I think yours should be published in the management or business journals in Burma. Good job man!!
Anonymous - 9/5/08, 10:55 AM
ဒိုင်ုက ပလာဇာစင်ကာပူရနဲ့ ဗီဗိုစီးတီးမှာရှိတယ်အမ
Anonymous - 9/5/08, 10:56 AM
TZA - 9/6/08, 6:53 AM
တို.ကတော. အီခိယာလို.ပဲဖတ်တယ် (ခင်ဦးမေကို အတုခိုးထားသည်)
JulyDream - 9/6/08, 10:48 AM
အီခီယားလို့ပဲ ခေါ်တယ်။ အဲဒီကို ၂ ခေါက်ပဲ ရောက်ဖူးသေးတယ်။ ပရိဘောဂတွေကို ခင်းကျင်းပြသထားတာကို အတော် သဘောကျမိတယ်။ ဆွဲဆောင်မှု အားကောင်းတယ်။
ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကလေး ဆောက်တဲ့အခါမှာ ပရိဘောဂတွေကို ဘယ်လို နေရာချထားမယ်။ အဲဒီ ပရိဘောဂနဲ့ လိုက်တဲ့ အိမ်ကလေးဖြစ်အောင် ဘယ်လို ဒီဇိုင်းထုတ်မယ် ဆိုပြီး အတွေးနယ်ချဲ့မိစေပါတယ်။
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘ၀ကတည်းက အဲဒီလို နေရာမျိုးကို ရောက်ဖူးရင် ဒီထက်မက အမြင်တွေ ကျယ်ပြီး ပရောဂျက်မှာ ဒီဇိုင်း ကောင်းကောင်းတွေ လုပ်ဖြစ်မှာဗျ။ အခုတော့ ကျောင်းပြီးမှ ဒီရောက်တော့လည်း မသိရသေးတာတွေ မမြင်ဖူးတာတွေကို မြင်ဖူးတွေ့ဖူးရတာပေါ့။
Anonymous - 9/6/08, 11:44 AM
those are piece of junk for first time buyers.
Andy Myint - 9/7/08, 12:01 AM
ဦးလေးက ဂုဏ်ထူးလည်း မထွက်ပါဘူး။ ဂန်ဒူးလည်း မဟုတ်ပါဘူး စာဖတ်သူ။ ဟဲဟဲ။
အဓိပတိကျူရှင်ဆိုတာ ဂုဏ်ထူး ဦးသိန်းနိုင်ကို ပြောတာလား ND။
သွားကြည့် ညီမ မေမိုးရော Daiso ကို ကြိုက်သွားစေရမယ်။
What I like about IKEA is not its product. It's about it management or sort of. (I dont really know management though)Thanks for your appreciation, Reader. I dont take myself as professional author to publish this :)
ဒါဆိုလည်း တို့မြန်မာတွေ ကျွဲခြေရာ ကြမယ် ကိုTZA
ဟုတ်တယ် ကို JulyDream .. ကျွန်တော်ကတော့ ငါထီပေါက်ရင် အိမ်ကို ဒီလို ဆင်လိုက်မယ်ကွလို့ တွေးနေတာ ဟဲဟဲ
You may say so Reader. I dont like all products from IKEA either. But I do like some stuffs though.
Anonymous - 9/8/08, 1:55 PM
Yes its pronounce i-ke-yar and owner isarichest man in the world so far,and good furniture warehouse ( store )
Andy Myint - 9/8/08, 9:37 PM
Really? I thought the richest man in the world is someone else. Anyway, really appreciate for droppingacomment.
Anonymous - 9/13/08, 3:44 PM
Believe me,thousand and thousands of IKEA stores all around the world.Bill gate is no more on the list coz of he shares and shift all his belongings to his foundation .
Andy Myint - 9/15/08, 5:00 PM
As far as I know, there are less than 300 IKEA stores world wide. Right? W. Gates is no more richest man but the richest one as at now is not the one from IKEA. Isn't it? Hee hee.. we are not done yet. :P
Anonymous - 11/25/10, 11:59 PM
စံပယ်ပန်း - 4/21/11, 8:26 PM
ကျွန်တော်တော့ အာကီယာလို့ ထွက်တယ်..။ တစ်ခေါက်မှမရောက်သေးဘူး..။ furniture တင်သီးသန့်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှတ်နေတာ..။ မဟုတ်ဘူးလား..။ ဈေးချိူတယ်ဆိုလို့ သွားကြည့်ဦးမယ်...။ ကိုကိုလာအောင်စောင့်လိုက်ဦးမယ်..။ ဟိဟိ..။
johnmoeeain - 9/15/12, 12:46 PM
တစ်ခါတစ်ခါ ikea ထဲရောက်သွားရင် ဘ၀ဆိုတာ typical တစ်ခု ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေး တစ်ခုခု ခံစားရတယ်...။ စက်ရုံထုတ်နဲ့ customized အတွေးတွေကြား ဗျာများနေရတယ်...။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် IKEA က ပစ်ပယ်လို့မရတာတော့ အမှန်ပဲ...။ နောက် သူ့ရဲ့ အဆောက်အဦးပုံစံနဲ့ အထဲရောက်သွားရင် ၀င်္ကပါဖြစ်သွားတဲ့ feeling ကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပဲ..။ ဒီပို့စ်လေးက စိတ်ဝင်တစား ဖတ်မိစေတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ...။
Anonymous - 7/27/13, 11:50 AM
အီခီယာက REDHILL MRT ကနေ ဟိုဘက်လမ်းကူးပြီး BUS 33 နှစ်မှတ်တိုင်လောက် စီးရင်လဲ ရောက်တယ်။ ကျွန်မက တော့ အိမ်နဲ့ နီးတဲ့ Alexandra Ikea (REDHILL) ပဲ လမ်းလျှောက် သွားဖြစ်တယ်။ အားတိုင်း သွားချင်အောင် စွဲဆောင်မှုရှိတာပါ။ စိတ်ကူးယဉ်လို့ လဲ ကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အခန်းကျဉ်းလေးကို ဘယ်လို နေရာချရမလဲ ဆိုတာတွေကိုပေါ့။ IKEA ကြက်ကြော်ကတော့ သွားတိုင်း စားဖြစ်တဲ့ အကြိုက်ဆုံးတခုပါ။